सार्वजनिक शिक्षा जोखिममा पर्दै गएपछि | Tapaiko Khabar
सार्वजनिक शिक्षा जोखिममा पर्दै गएपछि
तपाईको खबर संवाददाता प्रकाशित : वैशाख २७, २०७५ विचार
सार्वजनिक शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउन अनेक पहल गरिए पनि अपेक्षित उपलब्धि हुन सकेको छैन । विद्यालय शिक्षा र उच्च शिक्षाको हालत नाजुक बन्दै गएको पाइन्छ । निजी शिक्षण संस्थाको तुलनामा सरकारी शिक्षण संस्था निरीह र नाजुक देखिन्छन् । स्रोत साधनको न्यून उपलब्धता, कमजोर व्यवस्थापन, जवाफदेहीहीन नेतृत्व, फितलो अनुगमन निरीक्षण तथा कार्यप्रगतिको आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था प्रभावकारी नहुनाले सार्वजनिक शिक्षा जोखिममा पर्दै गएको छ । हुने खानेका लागि निजी र हुँदा खानेका लागि सार्वजनिक शिक्षा भएको छ । शिक्षण संस्था बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखानाको रूपमा परिभाषित हुँदै छन् । शिक्षा बृहत् क्षेत्र भएजस्तै समस्या र चुनौती पनि त्यतिकै पेचिला र व्यापक हुनु स्वभाविकै हो । शिक्षामा देखिएका समस्यालाई सरोकार पक्षसँगको सुमधुर सहकार्यबाट मात्र दिगो निकास दिनेतर्फ जिम्मेवार पदाधिकारी र निकाय संवेदनशील हुनुपर्छ ।
तोकिएको आवश्यक सेवा शर्त पूरा नगरिकन शिक्षण संस्था किन खुल्छन् ? शिक्षक, कर्मचारीको नियुक्ति, पदस्थापना, सरुवा आवश्यकता र चाहनाअनुसार विधिसम्मत भएका छन् त ? अनुशासित शैक्षिक वातावरण कायम राख्न किन सकिएको छैन ? यी र यस्तैखाले कतिपय प्रश्न राजनीतितर्फ लक्षित हुन्छन् । विद्यार्थी, शिक्षक कर्मचारीलाई आफ्नो योग्यता, क्षमताअनुसार दक्षता प्रदर्शन गरी विवेकपूर्ण निर्णय लिनलाई राजनीतिले प्रभाव पारेको छ । आफैँ नीति नियम बनाउने तर त्यही नीति नियमलाई मिचेर काम गर्न विवश बनाउने प्रवृत्ति अपरिपक्व राजनीतिको होइन र ? अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा पेसाकर्मीलाई प्रत्यक्ष, परोक्ष रूपमा निहित राजनीति उद्देश्य पूर्तिको लागि कठपुतली बनाइएको छ । तसर्थ, भावी पिँढीका राजनीतिकर्मीलाई इमानदार बनाउन अहिलेदेखि नै शिक्षा दिनुपर्ने खांँचो टड्कारो देखिन्छ ।
शिक्षक कर्मचारीलाई उनीहरूको पेसागत दक्षता र विवेकभन्दा पनि राजनीतिक आस्थाको आधारमा मूल्याङ्कन गरिनुका कारण बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट विमुख भएका छन् । विद्यालय वर्षको घटीमा २२० दिन खुल्नुपर्ने प्रावधान भए पनि ९० दिन पढाई भए ठूलो उपलब्धि भएको ठान्नुपरेको छ । पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकले निर्धारण गरेको समयावधि पढाई नभएको अवस्थामा हामीले कस्तो गुणस्तरीयताको अपेक्षा गर्ने रु अतः शिक्षण संस्था तोकिएको विधि र प्रक्रियाबाट निर्वाध रूपमा चल्न पाउनुपर्छ । शिक्षण संस्थामा अनुशासित विद्यार्थी, लगनशील शिक्षक र सचेत अभिभावकको खाँचो पर्छ । व्यावहारिक र कडा आचारसहिंताको व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । राजनीतिकर्मीले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यको अज्ञानताले शिक्षामा राजनीति गरेको हो भने उनीहरूको भूमिका के हुनुपर्छ भन्नेबारेमा शिक्षा प्रदान गरिनुपर्छ । यसबाट शिक्षामा हस्तक्षेपको राजनीति गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुग्छ । जानी–जानी शिक्षामा राजनीति गरेर शैक्षिक वातावरण खल्बल्याउने कुत्सित नियत भएका जो कोहीलाई अनुशासनको दायरामा ल्याउने तथा सार्वजनिक बहिष्कारसमेत गर्ने नीति अवलम्बन गरिनुपर्छ ।
यस भन्दा अगाडीकुन हिरोसंग काम गर्दै छिन कंगना
यस पछिनेपाल आउनु अघि मोदीको ‘ओली लक्षित ट्वीट’, कांग्रेसमा तरंग
tapaiko khabar गुणस्तरीय
tapaiko khabar शिक्षा